Cartography - Page 2 - Geofumadas
Araajida iyo ilaha macluumaadka sayniska ee u xilsaaran daraasadda iyo samaynta khariidooyinka joqraafiga.
Jaamacaddu waxay la xidhiidhaa Xirfadlaha Xirfadlaha
Fiirsaneysa inay horumar ah ee cilmiga sayniska iyo farsamada, horumarka, iyo febwari cusub ee codsiyada technology gundhig dunida sii kordheeysa caalimiga waxaa lagama maarmaan ah si loo horumariyo tababar waxbarasho ee dadka ay awoodaan in ay ka jawaabaan shuruudaha dhul kala duwan, ka aragti sawir leh, oo leh anshax, muuqaal, hal abuur iyo ...
Cartografia, Baridda CAD / GIS
Dabcan ArcGIS codsatay in Exploration Macdanta ah
Geedaha in kaynta waa shirkad la ah dalab tababar oo xiiso leh aagga geospatial ka kooban yahay ku takhasusay nidaamo kala duwan, xirfadlayaasha la aqoonsan yahay oo awood u gudbinta aqoonta habka waxbaridda waxtar leh oo aad rabto inaad la wadaagto waayo-aragnimada jaalkooda. waqti dhirta Tani kaynta oo la isugu a ...
Sayniska Warfaafinta iyo Teknoolajiyadda ... iyo GvSIG Community Community ee Honduras
berrinkii Information Geographic ayaa xoogaa kala bixiyeen in Honduras, oo kama duwana dalalka kale ee Latin American halkaas oo mashaariic badan ka dhigi maal culus khayraadka dibadda ama iskaashiga, laakiin ugu dambeyntii soo afjaro descontinuándose in hay'adaha qashinka dowladda waxtarka macluumaadka ...
Cartografia, cadastre, Baridda CAD / GIS
Nidaamyada isdhexgalka UTM ee lagu soo bandhigay Khariidadaha Google
Uma muuqdo, laakiin khayraadka ay PlexScape Web Services u diyaarisay in ay isku beddesho isku-duwayaasha oo ay ku muujiso Khariidadaha Google waa layli xiiso leh si loo fahmo habka isku-duwidda ee gobollada kala duwan ee adduunka. Tani, waxaa laga soo xulay guddi ka muuqda Nidaamka Isku-xirka, waddanka kadibna ...
U fiirso UTM isuduwidda Khariidadaha Google, oo isticmaalaya wax! Nidaam kale oo isudduwe ah
Illaa iyo hadda waxay ahayd wax caadi ah in la arko UTM iyo isku-duwidda juqraafi ee Khariidadaha Google. Laakiin sida caadiga ah hayaqaashka Google ee taageeraya kaas oo ah WGS84. Laakiin: Maxaa dhacaya haddii aan rabno in aan ku aragno Khariidadaha Google, isuduwaha Colombia ee MAGNA-SIRGAS, WGS72 ama PSAD69? Iskuduwaha Spain ee ETRF89, Madrid 1870 ama xitaa REGCAN 95?
Cartografia, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Buug-yaraha Sawir-la'aanta La Aqriyo
Nuqulka PDF-ka ee dukumiintiga fogaanta Qalabka Qalabka Xuduudaha ee Maareynta Dhulka ayaa diyaar u ah. Qiimayn qiimo leh oo hadda jirta hadda aynu tixgelinno muhiimada ah in anshaxanu uu ku yimaado go'aan qaadashada maareynta hufan ee kaymaha, beeraha, ilaha dabiiciga, meteorology, kartoonka iyo amar dhuleedka. Sida laga soo xigtay xogta ...
Cartografia, Baridda CAD / GIS, Head
Qiimaha istaraatiijiga ah ee macluumaadka dhuleed
Qaab-dhismeedka soo-bandhigista Khariidadda Jiilaalka ee Canary Islands, waxaa lagu qaban doonaa aqoon-is-weydaarsi ku saabsan Istaraatiijiyada Qorshaha Macluumaadka Xuduudaha. Qodobka ugu muhiimsan ee kuwani waxay diiradda saari doonaan macluumaadka juqraafi, taas oo ah habab macquul ah oo isku xidhan oo aqoonta jawiga jireed ee dhulka iyo horumarkiisa ...
Cartografia, Maamulka Land
Kuwa ku guuleystay abaalmarinta MundoGEO Award # Connect 2012
Ku guuleystayaasha MundoGEO # Connect Award, 2012, ayaa lagu dhawaaqay Talaadada intii lagu jiray MundoGEO # Connect LatinAmerica 2012. Abaalmarintan waxaa ka soo qaybgalay dhawr shirkadood oo u yimid inay sharaf u noqdaan finalka. Inkastoo ay tahay raajo suuq madow ah oo Brazil ah, waa jimicsi xiiso leh haddii aan ka fikirno in tani ay tahay naqshad horumarineed ...
Cartografia, Geospatial - GIS, tabo cusub
Khariidadaha aan la arki karin, taladayda si aan u akhristo
Buugga Khariidadaha La Arkayo ayaa la bilaabi doonaa isbuuca soo socda. shaqada oo xiiso leh Jorge del Rio San Jose, taas oo ka dhigaysa hab xiiso leh maaddo in inkastoo jir (maps), ayaa waxaad fartaan Wannaagga precipitously sannadihii la soo dhaafay gaar ahaan ay codsiga duurka computer ka, Internet iyo geomarketing . ...
Cartografia, Baridda CAD / GIS, tabo cusub
Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah sida mashruuc caddaaladeed oo sayniska ah
Wuxuu ayaa ku soo laabtay cadaalad sayniska wiilkaygii u sameeyaa, oo ka dib markii dhowr ah wada hadal macalinka ku saabsan fursadaha mashruuca ugu dambeyntii ku maray isaga la mid boodayaa ku dhowaad mitir oo leh farxad ... waxaan ku dhowaad laba sababtoo ah waa mawduuc in na fascinates labadaba. Sidoo kale, sababtoo ah mashruucan waa asalka ah, waxaan go'aansaday in aan ...
Apple - Mac, Cartografia, Baridda CAD / GIS
Beddelaan wadataa juqraafi darajooyin jajab tobanle, UTM iyo barbaro in AutoCAD
Template This Excel waxaa markii hore loo sameeyay si loogu bedelo isku-duwidda juqraafiga UTM, laga bilaabo qaabka tobanle ilaa heerka, daqiiqo iyo ilbiriqsiyo. Taasoo ka soo horjeeda qaab-dhismeedka aan horay u soo qabanay, sida ku jirta tusaalaha: Waxaa intaa sii dheer: Dhallinyaradu waxay isku xidhaan silsiladana waxay u kuurgalaysaa isku-duulimaadyada UTM, iyada oo xulashada ...
rasiidh Xafiiska dilaaga ah
Biyaha iyo khariidadaha. Iyadoo
Esri Spain ayaa bilaabay olole xiiso leh Maalinta Biyaha Adduunka, iyada oo la soo bandhigayo bogga internetka aguaymapas.com wargeyska in aanu waxoogaa trastocamos ah ee maqaalkan. "Munaasabadda Maalinta Biyaha Adduunka ee laga soo saaro Esri Spain waxaan rabnaa inaan muujinno sida abaarta bilihii ugu dambeeyay ay saamayn ugu yeelan lahayd ilaha biyaha. Waxaan aaminsanahay ...
ArcGIS-ESRI, Cartografia, Geospatial - GIS
Ku soo sawir muuqaalka Google Earth qaabka ecw
Baahida loo qabo: Waxaan u shaqeyneynaa inaan ka shaqeyno cadastre iyadoo la adeegsanayo sawirka Google Earth qaab qaab tartan leh oo ah mid khafiif ah. Dhibaatada: Qorraxda hoos u dhigaysa Stitchmaps qaabkeedu hooseeyo qaabka jpg, jibbaarada ay keento looma taageero Microstation. Xalka: Ku dhaji sawirka leh Stitchmaps, isku-dhafka Google Earth leh Microstation si aad u soo dhejiso soo qabashada georgeferenced ...
Cartografia, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Khariidado bilaash ah oo ka socda adduunka oo dhan
d-maps.com waa mid ka mid ah adeegyadan khaas ah oo aan marwalba rabno in aan jirno. Waa xariiro lacag la'aan ah oo diiradda saaraya bixinta khariidadaha qaybo ka mid ah adduunka, qaabab kala duwen oo kala duwan, sida baahida loo qabo. Macluumaadka waxaa loo kala soocayaa qaybo goboleed waxaana ka mid ah aruurinta qiyamka taariikhiga ah ee taariikhiga ah iyo sidoo kale ...
Cartografia, Internet iyo Blogs
UTM duwo Roobka isticmaalaya CivilCAD
Ugu dambeyntii waxaan ka hadlayaa CivilCAD, codsi ka shaqeeya AutoCAD iyo weliba Bricscad; Wakhtigan oo kale ayaan rabnaa in aan ku tuso sida loogu dhalin jir duwo, sidii aannu ku aragnay oo la Microstation Geographics sameeyo (hadda Bentley Map). Caadi ahaan waxyaalahan barnaamijyada GIS waxay leeyihiin wax badan oo wax ku ool ah, laakiin heerka CAD waa wali waa awood, ...
Geobide, Badalka iyo Isku duwidda System ED50 ETRS89
Advantage si ay ula socdaan awood of Geobide Suite, arki fursadaha inay u beddesho u dhexeeya nidaamka tixraaca. Interesting kuwa waa beddesho u dhexeeya kala duwan Datum kiiskan waan arki doonaa sida loo sameeyo nidaamyo ED50 iyo ETRS89 dhow yahay kiis la mid ah Latin America dhexeeya NAD27 iyo WGS84. Miyaa ...
ArcGIS-ESRI, Cartografia, cadastre
Qorshaha Maamulka Degdegga ah (GEMS) doorteen gvSIG
Waxaa la ogeysiisay hirgelinta codsiyada gvSIG si loo hirgeliyo hanaanka loo maro maareynta xaaladaha degdegga ah, sidaas darteed waxaan ku faafineynaa in ay ka fekereyso inay faa'iido u leedahay dad badan. Gobolka Mendoza ee Jamhuuriyadda Argentine, waa dhul beertay sababa juquraafi ahaan iyo marxalad ahaan waxaa saameeya ifafaale dabiici ah oo kala duwan: ...
Cartografia, GvSIG, Maamulka Land
Guatemala iyo caqabadkeedii si loo helo doorka Akademiyada ee Maareynta Dhulka
Qaybta Sayniska iyo Tiknoolajiyadda Jaamacada San Carlos ee Guatemala waa tusaale wanaagsan oo ah in akadeemiyadda ay tahay in ay sameyso si ay u sii wataan xirfad ay ku sii wadi karto degaanka maamulka dhulka. Tani waa shaqo murugo leh oo si tartiib ah u socdo, laakiin dib u eegis ayaan sameeyay saddex sano ka hor, waa ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 7 page Next